Xiaomi vao voamarina: mety ho ilay manana chipset Helio G90T na fakan-tsary 64 MP | Androidsis
Xiaomi vao voamarina: mety ho ilay manana chipset Helio G90T na fakan-tsary 64 MP
Ny finday avoakan'i Xiaomi manaraka dia mety ho ivon-toerana avo lenta. Ny andrasana manodidina ilay fitaovana miafina dia manondro fa ho tonga miaraka amin'ny sehatra finday izy io Helium G90T na fakan-tsary fakan-tsary faran'izay lehibe 64 megapixel… iza no mahalala raha hampiantrano ireo zavatra roa ireo?
Ny fahafahan'ny manaraka avy amin'ny Xiaomi, raha ny resaka smartphone dia mampiantrano ny vaovao lalao Mediatek processeur dia avo. Raha ny marina, mihoatra izany, zavatra azo antoka izany. Tsarovy fa tamin'ny hetsika fampisehoana nataon'ny SoC dia i Lu Weibing, CEO an'ny Redmi, nanambara fa hanangana finday miaraka amin'ity singa ity ilay orinasa.
Etsy ankilany, voalaza fa manamboatra smartphone amin'ny fakantsary 64 MP ny mpanamboatra sinoa, ary koa ny ataon'ny Realme, marika izay handefa ny voalohany amin'ny voalaza fa mitarika an'io 8 aogositra ho avy izao.
Mety ho telefaona voamarina Xiaomi miaraka amin'ny fakantsary 64 MP na Mediatek Helio G90T SoC
Satria a Telefaona Xiaomi miaraka amin'ny laharana maodely M1906GT vao tsy ela akory izay no nohamarinin'ny minisiteran'ny Indostria sy ny haitao informatika any Sina (MIIT), voalaza fa io no hahatratra ny tsena miaraka amin'ilay fakantsary na mpanera voalaza etsy ambony. Noho ny fankatoavana azy io dia nanondro ny fambara fa ity no volana ofisialin'ny terminal. Na izany aza, zavatra mbola tsy azontsika atao ny manamafy, noho izany dia mila mitandrina izy.
Mikasika ilay fitaovana voamarina miaraka amin'ny sensor 64 MP, ny zavatra tokana fantatsika dia izany ny telefaona dia hanana rafitra fakan-tsary quad aoriana. Ny haben'ny efijery sy ny karazany, ny fikirakirana ary ny fahaizan'ny bateria dia tsy fantatra. Na izany aza, ny antsipiriany bebe kokoa dia tokony hipoitra ao anatin'ny andro vitsivitsy, raha ilay fitaovana no nahazo ny fanamarinana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Xiaomi vao voamarina: mety ho ilay manana chipset Helio G90T na fakan-tsary 64 MP
HTC dia miomana ny hiasa indray amin'ny iray amin'ireo tsena mpifaninana indrindra eto an-tany
Huawei dia afaka nandefa ny P300, P400 ary P500 ao amin'ny faritra P